I-China Ikhwalithi ephezulu ye-L-CitrullineCAS: ifektri 372-75-8 nabaphakeli | I-Binshare
Ikhwalithi ephezulu ye-L-CitrullineCAS: 372-75-8
I-crystal emhlophe noma i-crystalline powder. Iyancibilika emanzini, ayincibiliki ku-methanol, i-ethanol ne-ether. Inganqamuka kusixazululo sayo esigxilwe yi-phosphotungstic acid futhi iphendulwe ngesisombululo se-alkali esigxile ekwakheni i-ornithine, i-carbon dioxide ne-ammonia.
Igama lesiNgisi: L (+) - Citrulline
Iphuzu lokuncibilika: 214 ° C
Ukujikeleza okukhethekile: 25.5 ° (C = 8,6NHCl)
Iphuzu lokubila: 306.48 ° C
Inkomba yokubonisa: 26 ° (C = 8,6mol / LHCl)
Isimo sesitoreji: STOREAT 0-5 ° C
Ukulingana kwe-Acidity: (PKA) 2.43 (AT25 ℃)
Ukuncibilika kwamanzi: 200g / L (20 ° C)
I-crystal emhlophe noma i-crystalline powder. Iyancibilika emanzini, ayincibiliki ku-methanol, i-ethanol ne-ether. Inganqamuka kusixazululo sayo esigxilwe yi-phosphotungstic acid futhi iphendulwe ngesisombululo se-alkali esigxile ekwakheni i-ornithine, i-carbon dioxide ne-ammonia. Usawoti wethusi uyikristalu elihlaza okwesibhakabhaka elinendawo encibilika ka-257-258 ℃. Indawo encibilika nge-hydroxide yayo, iChemicalbook185 ° C (ukubola), ingu- + 17.9 ° emanzini [α] D22. Kutholakala emakhabe njengamakhabe. Kubantu, i-citrate iyi-non-protein amino acid engabambi iqhaza kuma-protein synthesis, kepha inamandla okwakha ama-peptide bond. Phambilini bekucatshangwa ukuthi kukhona kuphela njengomkhiqizo ophakathi nomjikelezo we-ornithine - urea.
Izakhiwo Zamakhemikhali: I-White crystalline powder, encibilikayo ku-methanol, i-ethanol, i-DMSO namanye ama-solvents we-organic, kusuka ku-trichosanthin.
Sebenzisa: uhlobo lwe-1.L arginine lwalungiswa njengesixhumanisi se-NOx ngu-NO synthase
Imiphumela emibili ye-citrulline L- citrulline:
1. Thuthukisa amasosha omzimba.
2. ukugcina umsebenzi wokunyakaza ngokuhlanganyela.
3. Balance amazinga ejwayelekile kashukela egazini.
4. ocebile ukumuncwa antioxidant eziyingozi Chemicalbook radicals khulula.
5. Isiza ukugcina amazinga e-cholesterol ejwayelekile.
6. Gcina umsebenzi wamaphaphu weJiankang
7. Thuthukisa ukucaciseleka kwengqondo
Nciphisa ukucindezeleka futhi unqobe ukucindezeleka
9. ukuthuthukisa ukusebenza kwempilo yezocansi kwe-jiankang
Ukusebenza Nokusebenza: I-Citrulline iyi-non-protein amino acid enekhono lokwenza ama-peptide bond kodwa engabambi iqhaza ekuhlanganisweni kwamaprotheni. ICitrulline yake yathathwa njengomkhiqizo ophakathi nendawo womjikelezo we-urea Chemicalbook ring. Kodwa-ke, ucwaningo lwakamuva lukhombisile ukuthi i-citrulline ingasetshenziswa kabanzi kwezokwelapha, ekudleni, ekunakekelweni kwezempilo nakwezinye izici, futhi inemiphumela emihle yokwenziwa kwemithi.
Langaphambilini Ukuncintisana kwe-Isotonitazene CAS: 14188-81-9
Olandelayo: Ukuthumela ngokushesha i-Microcrystalline CelluloseCAS: 9004-34-6